August 5, 2017 – Arakan Times
AT Burmese စစ်တွေ တက္ကသိုလ်တွင်း တာဝန်ကျ ရဲတပ်သားများနဲ့ အစွန်းရောက် ရခိုင်လူမျိုး အခ်ျို့က ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး တစ်ဦးအား ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ၊ (၅)ရက် ၊ စနေနေ့ ၊ နံနက် ၉:၃၀ မိနစ် ၊ အချိန်တွင် ယခင် ဘုမေရွာဂေါင်း ရွာနေ ၊ ယခု ခေါင်းဒုက္ကာကျေးရွာနေ၊ ဦးမိုဟာမတ် အာဗ်ဒူလ္လာ (ဘ) ဦး အာလီအမတ် အသက် ၆၂သည် စစ်တွေမြို့ ဘုမေရွာသို့သို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မောင်းနှင် လာစဉ် စစ်တွေတက္ကသိုလ်မြောက်ဘက်ရှေ့တည့်တည့် ရှိ မင်းဂံရခိုင်ရွာ လမ်းမှ ရခိုင်လူငယ်တစ်ဦး စီးနှင်းလာသော ဆိုင်ကယ်တို့ တိုက်မိရာ နှစ်ဦးစလုံး ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာရရှိသော ရခိုင်လူငယ်အား စစ်တွေမြို့ပေါ်သို့ ဆေးဝါးကုသရန် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ၊ ဦး မိုဟာမတ် အာဗ်ဒူလ္လာကိုမှု စစ်တွေတက္ကသိုလ်တွင် လုံခြုံရေး တာဝန်ကျနေသော ရဲတပ်သားများက တက္ကသိုလ် ခြံဝင်းထဲ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး၊ ...
August 5, 2017	Leaveacomment 705 Views
August 5, 2017 By Staff Reporter, Aung Zaw Hein An old Rohingya man was brutally killed by Rakhine extremists in cooperation of Myanmar on duty security forces at the Sittwe University premises on5August 2017 at around 9.30 am. The corpse was identified as Mohammad Abul, son of U Ali Ahmad of Kone Dagar (Konka Fara) Sittwe. He is ...
Descriptions of persecutions on Rohingya will be apprised to outside world, says OIC Secretary General
August 5, 2017	Leaveacomment 575 Views
August 5, 2017 AT Staff ReportS The Secretary General of OIC, Dr. Yousuf bin Ahamed Al- Othaimeen visited the Kutupalong registered and unofficial camps of Rohingya refugees who fled to Bangladesh from Myanmar due to barbarous atrocities of Myanmar security forces on4August 2017. He came to Kutupalong camp by vehicle and met with various officials of Bangladesh government ...